Human Rights Watch oo ka digtay duqeymaha ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya. – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia - Idman news
Human Rights Watch oo ka digtay duqeymaha ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya. – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Muqdisho-KNN-Human Rights Watch ayaa ka digtay in duqeymaha ciidamada Mareykanka ee lagu soo celinayo Soomaaliya lagu beegsado dadka rayidka ah.
Human Rights Watch ayaa ka codsatay ciidamada Mareykanka inay mudnaanta siiyaan ilaalinta rayidka Soomaaliyeed ka dib markii madaxweyne Joe Biden uu saxiixay in dib loogu daabulo Somalia boqollaal ka mid ah ciidamada gaarka ah si ay u xoojiyaan Dagaalka ka dhanka ah Al shabaan,
Dhowr jeer waxaa lagu eedeeyay ciidamada Mareykanka 10kii sano ee lasoo dhaafay in howlgalo ay fuliyeen diyaaradahoodi dagaalka in lagu bartilmaamaysaday Dad rayid ah oo ay xitaa Taliska Africom ay qirteen.
Xoghayaha warfaafinta ee Pentagon-ka John Kirby ayaa horaantii isbuucan ku dhawaaqay in ciidamo Mareykanka ee ku dhow 500 oo askari ay dib ugu laaban doonaan Soomaaliya 17 bilood ka dib markii madaxweyne Donald Trump uu kala baxay ku dhawaad 750 askari oo Mareykan ah oo Somalia ku sugnaa.
“Waxay u baahan doonaan inay si dhow ula shaqeeyaan mas’uuliyiinta Soomaaliya iyo Midowga Afrika si ay uga fogaadaan inay ku soo noqdaan sharciyadii hore ee ku-xad-gudubyada dagaalka oo ay si dhaqso ah oo habboon uga jawaabaan khasaaraha rayidka.”
Previous WARKA SUBAX 8:00 AM (22-05-2022) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Next Weeraradda Al-shabaab ay ka geysanayaan gobolka shabeelada dhexe oo kordhay. – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia